दाताहरुले बनाईदिन्छु भनेका थिए नि घरहरु ? - suryakhabar.com
बुधबार, ०५ माघ २०७३
दाताहरुले बनाईदिन्छु भनेका थिए नि घरहरु ?
प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०७३, शुक्रबार
ओली सरकारले भूकम्प गएको एक बर्ष बित्दापनि पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम गर्न सकेको छैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले लगात संकलनमा अनियमितता भयो भनेर आरोप लगाएको छ । भूकम्प गएको समयमा चौधरी ग्रुपले १००० अस्थायी घर बनाईदिन्छु भनेको थियो त, एन आर एनले पनि १००० घरकै कुरा गरेको थियो । सहयोग गछु भन्ने ब्यक्ती तथा संस्थाहरुको लाईन नै लागेको थियो त्यसबेला । तर सरकारले भूकम्प लगातार गईरहेका कारण एक्सनमा आउन नसके पनि बर्तमान अवस्थामा नाकाबन्दी र भूकम्पको त्रास कम भईसकेको अवस्थामा पनि राहत दिन सकेको छैन । भूकम्प पुःननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ, पर्याप्त जनशक्ती नभएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताईन्छ ।
यसै बिषयलाई मध्यनजर गर्दै भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता एबम् सहसचिब रामप्रसाद थपलीयासंग हाम्रा प्रतिनिधिले गरेको छोटो कुराकानी :
अहिले पुनःनिर्माण प्राधिकरणले के गरिरहेको छ ?
हाम्रो प्राधिकरणको योजना अनुसार काम गरिहेका छौं, जनशक्ती नभएका कारण भनेजति काम गर्न सकेका छैनौं ।
अब बत पानी पर्ने सिजन पनि आयो, पीडितहरुलाई कुनै खास ब्यबस्था गर्नुभएको छ त ?
पानी परेर खासै फरक पर्दैन हामीले गर्ने कमहरु द्रुत गतीमा गरिरहृका छौं, तैपति पानी परेर त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने कम चैं हाम्रो भन्दा पनि गृह मन्त्रालयको हो । माहीले गृहसंग पनि समन्वय गरेर नै काम चैं गरिरहेका छौं । ईन्जीनियरहरु खटाईएको छ नि हैन ?
ईन्जिनियरहरु पीडितहरुको घरघरमा जानुभएको छ, बैकिँगं समस्याले गर्दा आठ वटा बैकबाट मात्र पैसा पठाउन सकेका छौं, तेह्र करोड रुपैंयाँ पठाईसकेका छौ, अब कामहरु द्रुतगतीमा अगाडी बढ्छ । भोलेन्टियरपनि राखेर काम अगाडी बढाउने भनिराखिएको छ । अनि दाताहरुले बनाईदिन्छु भनेका थिए नि घरहरु ?
थिए, एनआरएन अध्यक्ष शेष घलेले ५७३ घर बनाउने सम्झौता गरिसक्नुभएको छ, एक हजारको कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो, बाँकी घरहरु बनाउनको लागी पनि उपर्युक्त ठाँउ माग्नुभएको छ, हामीले उपयुक्त ठाँउ खोज्दै छौं, त्यो ठाँउमा ५७३ भन्दा बढी घर नआट्ने रहेछ । बिनोद चौधरी लगायतका अरुले पनि कुरा गरिरहनुभएको छ । बिस्तारै काम अगाडी बढ्दैछ । बाहिर सोचे जस्तो चैं सजिलो हुदैन ।
नेपाली काँग्रेसले पीडितको लागत संकलनमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ नि ?
लागत संकलनमा त्रुटि भएका सच्याउन मिल्छ, कोहि छुटेको छ भने थप्न र कसैको अनियमित छ भने हटाउन मिल्छ, यसको पुःन लागत संकलन हुंदैछ, दोलखामा भईसकेको छ, सबै लागत संकलन हुंदा संख्या घट्छ । अनि पीडितले राहत पाईन भन्यो भने सुनुवाई गर्ने ठाँउ छ त तपाईहरुको ?
पीडितले केहि बुझने भने प्रसा नलाग्ने सोथपुछ नम्मर ९८१६१८०१४२११४६५ हो । यसमा बुझ्न सकिन्छ, यदी यसबाट पनि संभब भएन भने हम्रै प्राधिकरणका सहसचिबको संयोजकत्वमा समिति बनाईएको छ, त्यसमा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।